Indoda yeScorpio kubudlelwane: Qonda kwaye Mgcine Ethandweni - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Indoda yeScorpio kubudlelwane: Qonda kwaye Mgcine Ethandweni
Indoda yeScorpio kubudlelwane: Qonda kwaye Mgcine Ethandweni
Indoda yeScorpio inamandla kakhulu kuyo yonke into eyenzayo. Unokuba liqabane elizinikeleyo nelinomdla, ukuba ecaleni kwakho ngalo lonke ixesha, uzama ukonwaba nawe kwaye wonwabe.
Kodwa unokucaphuka kakhulu aze aziphindezele xa umngcatsha. Akayi kuyeka ade akwenze uxolise okanye uzive umbi ngendlela awayeziva ngayo.
✓ Iinkonzo ✗ Ububi
Uyakwazi ukuba neengxoxo ezinzulu kakhulu. Usenokuyifihla indlela avakalelwa ngayo okwethutyana.
Umnqweno wakhe unamandla kwaye uyatya. Unokwenza into kodwa athethe ngokuchaseneyo.
Akayi kuvumela abanye ukuba bakukhathaze nangayiphi na indlela. Awazi kakuhle ukuba umi phi naye.
Unokuba unamathele kwaye abe nomnini, kumzamo wokunxibelelana nawe kwinqanaba lokomoya, kodwa yindlela abonakalisa ngayo uthando kunye neemvakalelo zakhe, ngokuqhankqalaza kwamaxesha anomdla.
Umntu ogqibeleleyo, osoloko ekulungele ukuthatha amanyathelo
Indoda yeScorpio yenye yeqabane elibandakanyekayo xa iselwalamano ngenxa yeemvakalelo ezinamandla kunye neemvakalelo.
Unothando kakhulu kwaye uthambile kunye neqabane lakhe, akanakuphulukana nembono yokuba ngeli xesha, olu lwalamano luya kuba lolokugqibela, nomntu okhethekileyo oza kubamba izandla zakhe ngonaphakade.
Nangona kunjalo, oku kukwathetha ukuba xa kuqhekeka, uthando lwakhe luya kujika lube yintiyo, iimvakalelo ezingathandekiyo ngokupheleleyo eziya kuguqulwa zichasene nabantu bonke. Ngokubanzi, uyeka nakuphi na ukuthintela kwaye anike nje intliziyo yakhe kwisitya kwiqabane lakhe.
Iqabane leScorpio lithanda ukuziva lilawula kubudlelwane, ukuthatha ukhokelo kubomi beqabane lakhe. Nguye owenza izicwangciso, ezibeka ekusebenzeni nangona efuna, kwaye ngokuzonwabisa ngokubanzi ngokudibanisa ukungavisisani kweqabane lakhe.
Ayikuko ukuba usebenzisa la mandla ukumphatha kakubi nokumenzakalisa, kodwa uyonwaba kakhulu kwaye ayazi ukuba ulawula. Nangona kunjalo, ukubona nje indlela azityhila ngayo kuwe ngokupheleleyo, enobuthathaka kunye nokuba semngciphekweni, uya ubuxabisa ngokwenene ubuntu bakhe bokulwa.
Nangona uya kuqhuma ngokoqobo xa ekrokrela kunye nomona, unokufunda ukujongana nalo xa ixesha lifika.
yintoni uphawu ngoJuni 4
Indoda yaseScorpio esithandweni inokuba yeyona ndoda yonwabileyo kunye neyona ndoda ithandekayo xa yonke into ilungile. Uyathuthuzela kwaye ukhululekile, kwaye unyamezele kakhulu kuzo zonke iimpazamo zeqabane lakhe, ukhawuleza alibale malunga neempikiswano kunye neengxabano kumzamo wokwenza ibhalansi egqibeleleyo.
Iimvakalelo zakhe zinzulu kwaye zinomdla, zihlala zinzima kakhulu kubafazi abathile abanobuthathaka abangakwaziyo ukuthatha loo nto. Umnqweno wakhe uyintaba-mlilo, kwaye ugqabhuza iingqondo zibuthathaka.
Ngapha koko, ufuna umfazi owaziyo ukuba ufuna ntoni ebomini kwaye ongazukuzama ukuphila ubomi bakhe ngokurholisa eyakhe. Unokumdlula kuyo yonke imimandla kuyo yonke into ayikhathaleleyo, ngakumbi intlonipho kunye nokunconywa aya kuba nako.
Ungumntu ogqibeleleyo ofuna ukuthatha yonke into ayise kwinqanaba elilandelayo, aphuhlise izakhono zakhe, aqhubele phambili kwinqanaba lezentlalo kwindawo ephezulu, enze ikhaya elizinzileyo nelikhuselekileyo lokukhulisa abantwana bakhe.
Ngokuphathelele abantwana bakhe, uya kuyikhathalela imfundo yabo, abafundise isimilo kunye nemigaqo esisiseko yamadoda ahloniphekileyo. Akukho nto ibaluleke ngakumbi kuye ukhuseleko kunye nokuphila kosapho.
Esinye sezizathu zokuba kutheni elawula kangaka kunye nokuma kunye neqabane lakhe kungenxa yokuba enolwalamano olunzima nonina, owayehlala efuna ukumlawula. Kufuneka aqonde ukuba awufuni kumhlutha inkululeko yakhe kunye nokuzimela kude.
Ngelixa enqwenela ukuthandwa kunye nokwabelana ngobomi bakhe nomntu amkhathaleleyo, woyika kakhulu ukuvula, ukuba nothando kunye nokusondela emntwini.
Unoloyiko lokuba yonke into inokuphela ngenxa yokuba enovakalelo kwaye eneemvakalelo ezigqithileyo, ukuba angalahlwa liqabane lakhe aze ashiye yedwa. Ukuthiyile ukuba yedwa ngaphezu kwayo nayiphi na into esehlabathini.
Kungenxa yoko le nto ehlala esebenzisa iindlela ezithile zokukhusela iimeko ezinjalo, njengokungazibandakanyi ngokweemvakalelo. Mkhawulezise kwaye uya kubanda ngokukhawuleza.
Njengeqabane lakhe, ngokuqinisekileyo uya kufumana indumiso engapheliyo
Ngelixa indoda yeScorpio ifuna ukuba uyinike indawo yayo yasimahla, nawe akufuneki umvumele ukuba abone yonke into ekhoyo ukubona kwasekuqaleni. Vumela isilayidi esincinci semfihlakalo sidadare phakathi kwenu ukuze ahlale enomdla kwaye angakulibali ukuba kutheni ethandana nawe.
Sebenzisa esi simo sengqondo kunye nendlela yokwenza kuphela ukuba uyazi into oyenzayo, kodwa xa sele ebambekile kumnatha kwaye akuthembele ngokupheleleyo, uya kuba yindoda eyahlukileyo ngokupheleleyo.
Ngaye, ukungaphumeleli ngakumbi kunye nolwalamano olonakeleyo ebenalo, kokukhona unokuzithemba kwaye ekulungele lowo ubalulekileyo. Onke amava kunye neziganeko ekwakufuneka ehamba kuzo zonke zazilungiselela uthando olunye lokwenene.
Bubuphi ubudlelwane obo ngaphandle kwengxabano kunye neempikiswano ezincinci? Kuye, ukuzibophelela kungumbono obaluleke kakhulu kwaye kuya kufuneka ayilungiselele kakuhle le nto, ukuze umazi kakuhle omnye umntu, umthembe ngokungagungqiyo.
Ukuba ukulungele ukuncama inkululeko yakho kunye nentwana yenkululeko yakho yokwenza, ke ummi weScorpio uya kukuthatha phantsi kwamaphiko akhe kwaye akukhusele ngokungenasiphelo kwiingozi ezinobungozi zehlabathi.
Akukho namnye onamandla kwaye uzimisele njengaye kule nkalo. Ecaleni kwakhe, iqabane lakhe liya kufumana indumiso engapheliyo kwaye lithweswe ukumkanikazi.
Ngomthonyama weScorpio, yonke into iyakuba malunga nomzabalazo wamandla, ukuphikisana okungapheliyo kwizihloko ezincinci, ngubani othabatha isigqibo sokuba aye phi kwaye atye ntoni, kwaye ukuba uqhubeka ngokuchasene nentando yakhe kwimfazwe engapheliyo, ayilunganga. Okanye unokufuna ukunikezela kwaye uphile kamnandi phantsi kobunkokheli bakhe.
Kuya kufuneka uyazi ukuba akube ethathe isigqibo sokukuthatha njengomfazi wakhe, sisigqibo esisigxina esingasoze sizisole okanye asibuyise.
Uswelekile xa ephupha ngekamva kunye nawe, malunga nokwakha indlu kunye, malunga nokuba nabantwana, malunga nokuhlala kunye.
Indoda yeScorpio iyakuhlala ilwa kwaye izabalazela ukugcina ubudlelwane buphila ngazo zonke iindlela eziyimfuneko, kwaye naxa ufuna ukwahlukana, uya kuqhubeka nokuzama ukuzama kwakhona, ngaphandle kothando olungenamda olwenza isenzo sakhe.
ungayifumana njani indoda ebuyayo ukuba ibuye
Ubunzulu beemvakalelo zakhe kunokuba nzima kakhulu ukubuthwala, kwaye iimowudi zakhe eziguqukayo ziyacaphukisa ngamanye amaxesha, yiyo loo nto. Ufumana ukukhetha ukuba kufanelekile.
Iimpawu zoMntu weScorpio othandweni: Ukusuka kuBucala kuye ekuthandeni kakhulu
Ukuhambelana kweScorpio eluthandweni
Ukuthandana nomntu weScorpio: Ngaba unayo into eyenzayo?
Ngaba amadoda angamaScorpio anomona kwaye anamandla?
Iimpawu zoBudlelwane beScorpio kunye neengcebiso zothando
I-Scorpio Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
Umfazi weScorpio Othandweni: Ngaba Uyalingana?
Ngomhla wama-26 kuMeyi wokuzalwa
Scorpio umfazi kunye nepisces indoda
Uphawu lweZodiac ngoMeyi 24
yintoni i-zodiac ngo-juni 22
i-taurus eyindoda kunye ne-aries yabasetyhini
iiaries kunye leo ebhedini
Wazalwa nge-saturn kwi-sagittarius